7 Best flea Markets Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Best flea Markets Na Europe
Were ụgbọ okporo ígwè gaa ebe zuru oke maka imebi obodo ma ọ bụ ịzụ ahịa, isi obodo kachasị ịtụnanya na Europe nwere ihe niile. Flea ahịa bụ ebe ochie na oge a, ugbu a na akụkọ ihe mere eme, zukọta, ebe ihe uku putara, na nke anyi 7 ahịa kacha mma kacha mma na Europe bụ ihe atụ zuru oke.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ịzụ ahịa, na karịsịa maka vinteji Mwekọta, mgbe ahụ ndị a 7 ahịa kacha mma kacha mma na Europe ga-abụ nrọ. Nanị na-eso anyị kacha flea ahịa na Europe ndu, na jidere a nnukwu akpa akwa!
1. Ahịa Munich Flea
Ọ bụrụ na ị na-aga Bavaria maka Ememe ndị Europe n'oge opupu ihe ubi, ma na-achọ ụfọdụ akụ ọhụrụ vinteji, mgbe ahụ ị ga-ahụ Munich n'anya nke oke azụ ahịa. Ahia ahihia a di egwu n'ememe oge opupu ihe ubi ma eme ya otu ugboro n'afọ.
A ga-agafe 2000 ndị na-ere ahịa, na ịtụnanya vinteji ọ bụ, dị ka a louis vuitton akpa na-akpa ọchị ahịa. Ya mere, ị kwesịrị eleghị anya doro anya na Saturday maka Riesen-Flohmarkt Theresienwiese ahia ahu na Munich. Na mgbakwunye, bia na ndepụta ahia zuru oke, ma nọrọ ebe ahụ dịka i nwere ike. Ọnụ ụzọ meghere na 4 m, na ị gaghị abụ naanị nnụnụ mmalite!
2. Ahịa Amsterdam flea
Ọ bụrụ na ị maghị, Amsterdam bụ obodo nwere ọgaranya akụkọ ihe mere eme ahia. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na otu n'ime ahịa flea kacha mma na Europe bụ Amsterdam. Otu ugboro n'afọ, n'okporo ámá ndị mara mma na Amsterdam, ghọọ ahịa n'èzí, ebe ị nwere ike ịzụ ahịa na sook elu ịtụnanya ikuku na otu nke kasị ukwuu obodo na Europe.
Otu ugboro n'afọ, dị ka ememme na ụbọchị Eze, ọwa mmiri na alleys nke Amsterdam na-agbanwe ghọọ nnukwu ahihia. Chụchaa vaịn, art, Ngwa, na akụ ndị ọzọ ejiri aka gị ga - echere gị n’ahịa akpịrị egwu a dị egwu.
Mgbe ole? 6 onwem na 8 pm na Eprel 27th.
Ahịa flea kachasị ukwuu na nke a ma ama na France, the Grande Braderie de Lille flea market ga-anabata ndị ọbịa 10,000 ndị na-ere ahịa.
Ahịa ahihia Lille bụ ihe omume kachasị ukwuu nke afọ ma na-ewere ọnọdụ na ngwụcha izu mbụ nke Septemba. Ọ bụrụ na ị na-na Devid agụghị ndị gbara, na ihe ochie, mgbe ahụ, ị ​​ga-mma ka akwụkwọ tiketi ka Lille maka September 4nke– 5nke, maka extravaganza Devid agụghị ndị gbara.
Ọ bụ kwuru, na ọ ga-abịaru gị nso 40 oge iji gafee ebe niile, na nke ahụ na-enweghị ịkwụsị na ịzụ ahịa.
Ahịrịokwu ole na ole na-enye aka & na-amụta:
“Gịnị bụ ọnụ ahịa gị kacha mma?”- Gịnị bụ ego gị kacha mma?
"Coupons la poire en Deux" - Ka anyị zute onwe anyị n'etiti / kụọ ahia
"Banyere anyị!”- Deal!
Esi e? Take an hour TGV ụgbọ okporo ígwè njem si Paris.
4. Market Portobello Road Na London
Ahịa flea kachasị mma na England na-eme kwa ụbọchị na ahịa Portobello na London. Ejiji, ihe mgbe ochie, nri, akụ nke ejiri aka abụọ ga-echere gị ụbọchị ọ bụla n'izu, ma dịrị njikere maka mmụba nke ike na agba na Satọde.
Ya mere, mgbe otu ụbọchị nke ochie ahịa, ị nwere ike jidere na-atọ ụtọ veggies, cheese, na ọgwụgwọ ndị ọzọ maka nri ehihie ngwa ngwa tupu ị gaa n'ihu na ịchọgharị mmanya gị na ahịa ejiji na Westway. Itingga ileta okporo ụzọ okporo ụzọ Portobello bụ otu n'ime ihe kachasị mma ịme na London, na ị kwesịrị ị na-arara a ụbọchị zuru nke a flea ahịa na London ịrịba ama.
Mgbe anyị chere echiche banyere Paris, anyị na-ese ikuku ozugbo. Ọpụrụiche, ihe omimi, ochie, eze niile na-echeta Paris, na ya ịtụnanya ahuhu flea.
Ahịa ahihia Paris bụ otu n'ime ahịa flea kachasị mma na Europe n'ihi akụ dị oke egwu ọ na-ezo. Ihe omuma Afrika, vinteji ji achọ iberibe, na uwe bụ naanị ole na ole n'ime ihe ị ga-ahụ na nnukwu akpịrị a.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iweta obere Paris, mgbe ahụ Paris flea market bụ ebe ịzụ ahịa. Start na-amalite ọchịchọ gị na Okporo Street, isi n'okporo ámá, and walk down in order to go into the separate markets.
Mgbe ole? Saturday-Mọnde
Esi e? Were metro, gaa Porte de Clignancourt na Line 4, ma soro otutu mmadu kwue na nnukwu ihe eji agafe.
6. Ahịa Egwuregwu Brussels Ball
Naanị ahịa akpịrị na-emeghe 365 ụbọchị n'afọ, ahịa bọọlụ bọọlụ dị na Brussels, bụkwa nnukwu na Belgium.
N'ime obi mpaghara Marolles, ị ga-ahụ ihe ndekọ vintint, na akwụkwọ ndị a na-adịghị ahụkebe edina na blanket. N’okporo ámá ndị dị nso, ị ga-ahụ ụlọ ahịa aka abụọ na nke ochie.
Mgbe ole? Oge kachasị mma iji chọọ ọchịchọ akụ bụ Thursday na Friday.
Ebee? Ebe du Jeu de Balle Brussels
Luxembourg na Brussels Zụọ Ahịa
Antwerp na Brussels Zụọ Ahịa
Amsterdam na Brussels Zụọ Ahịa
Paris na Brussels Zụọ Ahịa
Ọtụtụ ahịa flea dị na Milan, nke ahụ abụghịkwa ihe ijuanya dịka ọ bụ isi obodo ejiji ụwa. Mercatone dell’Antiquariato bu ahia ahihia kacha na Milan ma na eme na Sunday nke ikpeazu nke onwa obula. A ga-enwe 380 oche nke ihe ochie na uwe ochie, na-eche gị.
Otú ọ dị, hippest flea flea na Milan bụ East Market. Ọ bụrụ na ị na-achọ mkpokọta mkpokọta ma ọ bụ ihe osise ọgbara ọhụrụ mgbe ahụ ị ga-ahụ n’anya ahịa ahịa ọwụwa anyanwụ. E wezụga, ị nwere ike ijide nri ehihie ma ọ bụ biya na DJ set, mgbe ị na-awagharị na gburugburu jụụ ahịa guzo. Ozugbo ị banyere, ị gaghị achọ ịhapụ ihe a ochie & vintage otu.
Ebee? Via Mecenate, 84
Mgbe ole? Sundaybọchị Sọnde ọ bụla
Otu esi aga East Market na Milan? Were akara metro M2
Europe bụ ihe na-adọrọ adọrọ nke ochie na oge a, na-abịa ibi na ahịa ịtụnanya kacha dị ịtụnanya. Njem gaa Europe agaghị emecha n'ejighị otu ụbọchị n'ime otu kachasị mma 7 ahia ahia na Europe. Ọzọkwa, ịlaghachi n'ụlọ na-enweghị opekata mpe 1 mpempe Devid agụghị ndị gbara dị ka ị na-agatụbeghị mgbe Europe.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem gị gaa ndị a 7 kacha mma flea ahịa na Europe ụgbọ okporo.
Want chọrọ Embed anyị blog post “7 Best Flea Markets In Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-flea-markets-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)